न्यूयोर्कमा होस्टलहरू | यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | आवास, न्यूयर्क
न्यूयर्क यो संसारको ठूलो शहरहरु मध्ये एक हो र त्यहाँ त्यस्ता मानिसहरु छन् जसले यति माया गर्छन् कि उनीहरु पछाडि र पछाडि फर्केर जान्छन्। यो वास्तवमै सस्तो शहर होइन तर केही रणनीतिहरूको साथ धेरै पैसा खर्च गर्न सम्भव छैन।
जब यो हुन्छ आवास बचाउनुहोस् यो जटिल हुन्छ: खानामा बचत गर्न सजिलो छ तर तपाईंको तकियामा बचत गर्न अलि बढी खर्च लाग्छ। यो त त्यो हो backpacker होस्टल हाम्रो सहायता गर्न आउनुहोस्। त्यहाँ छन् न्यूयोर्कमा होस्टलहरू? अवश्य!
1 HI न्यूयोर्क
2 YMCA पश्चिम साइड
3 स्थानीय न्यूयोर्क
4 न्यू योर्क मूर छात्रावास
यो होस्टल धेरै लोकप्रिय छ र माथिल्लो पश्चिम साइडमा अवस्थित छ, विशाल सेन्ट्रल पार्कका दुई ब्लकहरू र सबवेबाट चरणहरू जुन तपाईंलाई शहरभर शाब्दिक रूपमा लैजान्छ। यो अधिक जानकारी को लागी लोकप्रिय Harlem पड़ोस र कोलम्बिया विश्वविद्यालय को पैदल दूरी को भित्र छ।
यदि तपाईंले उसलाई पहिल्यै चिन्नुभएको छ तर वर्षहरूमा भएको छैन भने म तपाईंलाई भन्नेछु पूर्ण रूपमा मर्मत गरिएको छ र आज यसले वाइफाइ इन्टर्नेट र हरियो पार्क सुधार गरेको छ जुन शहरको सब भन्दा ठूलो निजी पार्कहरू मध्ये एक हो। भित्र एक क्याफेटेरिया पनि छ जसले दिनभरि खाना खान्छ, त्यहाँ एक सामान्य उपकरण रसोईघर, लुगा धुने र यात्रुहरूका लागि क्रियाकलाप र घटनाहरूको एक सुपर पूर्ण कार्यक्रम छ।
धेरै कुरा नि: शुल्क छन् यहाँ: बिहानको खाजा छात्रावासमा बस्नेहरूका लागि प्रिमियम (चार देखि छ ओछ्यान सम्म), लाँकर कोठामा, पानाहरू, दैनिक भ्रमणs, मोबाइल र अन्य ग्याजेटहरू र इन्टरनेट वाईफ़ाई
मूल्यहरु? उदाहरण को लागी, म अर्को मे को अन्त्य र महिला बेडरूम मा एक ओछ्यान खोजेको छु डिलक्स प्रीमियम चार ओछ्यान रातको 65 XNUMX डलर लाग्छ। छ ओछ्यान भएको छात्रावासमा दर drops१ डलरमा झर्छ, १० देखि 61 56 मा, र १२ ओछ्यानमा यो $ $$ छ। प्रीमियम डिलक्स बेडरूमको मामलामा, दरले ब्रेकफास्ट र स्नानको लागि फ्लिप-फ्लपको एक जोडी समावेश गर्दछ।
अन्तमा, होस्टलको नीतिले जनाउँछ कि तपाईं प्रति वर्ष २० रात सम्म रहन सक्नुहुन्छ।
YMCA पश्चिम साइड
त्यहाँ वास्तवमा धेरै YMCA शाखाहरू छन् र यो विशेष गरी पश्चिम rd 63 औं र 5th औं सडकमा अवस्थित छ। वाईएमसीए एक संस्था हो जुन समुदायलाई धेरै सेवाहरू र ठाउँहरू प्रदान गर्दछ र त्यहाँ सेवाहरू जहिले पनि हुन्छन् यात्रीहरु / पाहुनाहरु को लागी कोठाहरु।
तिनीहरू मित्रैलो कर्मचारी भएको र उचित मूल्यमा राम्रो अनुभव प्रदान गर्ने बारे ख्याल राख्छन्। मा शाखा को मामला मा वेस्ट साइड यो पनि अवस्थित छ केन्द्रीय पार्क को धेरै निकटलिंकन सेन्टरको पट्टि पट्टी, पसल र यातायातका लागि धेरै सजिलो पहुँचको साथ एक महान छरछिमेकमा। जोहरू आफ्नो कोठामा बस्छन् स्वच्छ कोठाहरू भेट्टाउनेछन् वातानुकूलनको साथ, नि: शुल्क वाइफाइ र सफाई सेवा.
त्यहाँ छन् एकल र डबल बेडरूम र पनि एक प्रदान गर्दछ जिम, एक क्याफे, दुई पोखरी र खेल र संगीतको साथ बैठक कोठा। स्पष्ट रूपमा, विचार सँधै सामजिक हुनु हो।
यो होस्टल "न्यूयोर्कमा तपाईंको साथी" को रूपमा पदोन्नति गरिएको छ, आरामदायक, सफा र स्टाइलिश ठाउँ रातको समय संसारको सब भन्दा राम्रो सहरहरु मध्ये एकमा बिताउन। यो रानीमा अवस्थित छs, म्यानहट्टन र ब्रूकलिनबाट सबवे स्टेशनहरूको केहि जोडी।
यसमा २-घण्टा स्वागत, वातानुकूलित र तताउने, सिक्का द्वारा संचालित लुन्ड्री मेशिनहरू, एक आम कोठा मानिससँग भेट्ने कोठा, साधारण बाथरूम, नि: शुल्क वाइफाइ, एक सुपर पूर्ण बार, कम्प्युटरहरू र प्रिन्टरहरू, एक भान्साघर, सामान भण्डारण, एक पोर्च, safes र कक्षहरु सेक्स द्वारा विभाजित। त्यहाँ छात्रावास, निजी चार ओछ्यान कोठा र डबल / ट्विन कोठा छन्।
साधारण बेडरूमहरूमा ओछ्यानहरू प्यानेलमा विभाजित हुन्छन्, प्रत्येक ओछ्यानको यसको प्लग, यसको पठन प्रकाश र कुञ्जीको साथ हातमा चीजहरू छोड्ने ठाउँ छ। प्रत्येक बेडरूमको आफ्नै साझा बाथरूम हुन्छ, त्यस्तै सानो कोठामा होइन जुन निजी बाथरूम हुन्छ। बारले कफी र पेय र एक बिहान एक हल्का बिहानको सेवा गर्दछ। यदि तपाईं तिनीहरूको वेबसाइटमा जानुहुन्छ भने तपाईंले पूरा अक्षर देख्नुहुनेछ।
मूल्यहरु? केही हिसाब गर्नुहोस् प्रति रात $ 60.
न्यू योर्क मूर छात्रावास
यो एक छ होफ्टल माउन्ट एयरको साथ, धेरै विशाल यो पूर्वी विलियम्सबर्गमा छ, को छिमेकमा ब्रूकलिन र यो सस्तो छैन तर यो सबैभन्दा सुन्दर हो। यसको वरपर क्याफेहरू, आर्ट ग्यालरीहरू, बारहरू, रेष्टुरेन्टहरू, पसलहरू र सूर्य अस्ताउँदा एउटा उत्तम रात हुन्छन्। यो तीन धेरै यात्रा गर्ने भाइहरूले चलाउँछन्
यो होस्टल केही सबवे स्टेशनहरूबाट केहि मिनेट पैदलको दूरीमा छ र एक परिवर्तनको साथ तपाईं म्यानहाटनको यूनियन स्क्वायरमा १ 15 मिनेटमा आइपुग्नुहुन्छ। यसको स्टाफ धेरै अनुकूल छ, धेरै भाषाहरू बोल्छ र तपाईं पक्कै पनि सजिलो महसुस गर्नुहुनेछ। लबीमा र मा नि: शुल्क वाइफाइ पनि छ कोठाहरू जुन सामान्य वा निजी हुन्। यस अवस्थामा छात्रावास मिसिएका छन् र त्यहाँ केवल महिला मात्र छन्।
प्रत्येक बेडरूमको आफ्नै बाथरूम हुन्छ, तिनीहरूसँग उच्च छत छ र धेरै उज्यालो छ। त्यहाँ तिनीहरूमा लाकरहरू छन् जहाँ पाहुनाहरूले आफ्नो व्यक्तिगत सामानहरू भण्डारण गर्न सक्दछन् र लकहरू $3मा बेचिन्छ यदि तपाईं आफैंलाई नराख्नुभयो भने। धेरै कोठामा बunk्क बेड छैन तर सामान्य जुम्ल्याहा वा क्वीन साइज बेडहरू छन् (खराब छैन)। अर्कोतर्फ, होस्टलमा तीन निजी कोठा छन् जसको निजी बाथरूम छ तर यसले तौलिया, पानाहरू र तताउने वा वातानुकूलित पनि प्रदान गर्दछ।
प्रत्येक कोठामा तीन ओछ्यान छन् र यदि तपाईं सुत्न चाहानुहुन्छ भने तपाईंले सबै तीनलाई मात्र भुक्तान गर्नुपर्नेछ। यदि तपाईं ठूलो समूहमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ छ वटा निजी कोठा पनि छन् तर तपाईंले आगाडि सूचित गर्नुपर्नेछ। मूल्यहरु? मे २०१ 2018 को लागि-ओछ्यानमा साझा डोरमेट्रीमा ओछ्यान आरक्षण गर्दै मूल्य चार रात को लागी २ 250० डलर हो। यो प्यारा होस्टल ब्रूकलिनको १179 Mo मूर स्ट्रीटमा अवस्थित छ।
न्यूयोर्कमा होस्टलहरू आउँदा यी केहि विकल्पहरू छन्। तपाईमले देख्न सक्नुहुनेछ, मूल्यहरू औसत $ $०, यद्यपि सस्तो साइटहरू फेला पार्न सम्भव छ, तपाईलाई दरको साथ गणना गर्न सजिलो हुनेछ। उत्तम कुरा तपाईले के गर्न चाहानुहुन्छ भनेर सोच्नु हो, तपाई के जान्न चाहानुहुन्छ र तपाईको वरिपरि होस्टल फेला पार्न कसरी घुम्ने योजना छ। भाग्यले साथ दिओस्!
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » शहरहरू » न्यूयर्क » न्यूयोर्कमा होस्टलहरू